Baiboly pejy 43 - Ny Baiboly
Voalohany < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Manaraka Farany
Eksaody toko 21 (tohiny)
25efain-dotra ny voadotra, efain-dratra ny ratra, efai-mangana ny mangana.
26Raha misy olona mamely ny mason'ny ankizilahiny na ny ankizivaviny, ka maha-jamba ny masony, dia halefany ho afaka izy ho onitry ny masony. 27Ary raha mahafa-nify iray amin'ny ankizilahiny na ny ankizivaviny izy, dia handefa azy ho afaka ho onitry ny nifiny.
28Raha misy omby manoto lehilahy na vehivavy ka mahafaty azy, dia ny omby no hotoraham-bato sy tsy hohanin-kena, fa ny tompony ho afaka. 29Raha omby efa nanoto hatramin'ny ela anefa sady efa nilazana izany ny tompony, nefa tsy mitandrina azy, dia hotoraham-bato ny omby, raha mahafaty lehilahy na vehivavy, ary atao maty koa ny tompony. 30Raha vidin'aina no asaina hataon'ny tompon'omby dia haloany izay didiana haloany. 31Raha zazalahy na zazavavy no totoin'ny omby, dia io lalàna io ihany koa no hampiasaina. 32Fa raha andevolahy na andevovavy no totoin'ny omby dia volafotsy telo-polo sikla no haloa ho an'ny tompon'andevo, ary ny omby hotoraham-bato.
33Raha misy olona manokatra lava-drano, na olona vao nandavaka lava-drano ka tsy mandrakotra azy, ka misy omby na ampondra latsaka ao, 34dia hanonitra ny tompon-davaka, haloany volafotsy izay vidin'ny biby, fa ny biby maty no ho azy.
35Raha misy ombin'olona manoto ombin'olon-kafa ka mahafaty azy, dia hamidin'izy ireo ny omby velona, ka ny vidiny hozarainy, ny omby maty koa hozarainy. 36Raha fantatra anefa fa efa mpanoto hatramin'ny ela ilay omby fa tsy nitandrina azy ihany ny tompony, dia hanonitra izy, hefainy omby ny omby, fa ny omby maty no ho azy.
Eksaody toko 22
Didy sy sazin'ny heloka sasany.
1Raha misy olona mangalatra omby na zanak'ondry, ka mamono izany na mivarotra, dia honerany omby dimy ny omby iray ary zanak'ondry efatra ny zanak'ondry iray.
2Raha misy mpangalatra azo manami-trano alina, ka voavely izy ka maty, dia tsy misy valin-drà amin'izany; 3fa rahefa niposaka kosa ny masoandro dia hisy valin-drà ihany. Hanonitra ny mpangalatra; raha tsy manana na inona na inona izy dia ny tenany no amidy ho onitr'izay nangalariny; 4ary raha mbola tratra velona eo an-tànany izay nangalariny, na omby na ampondra na ondry, dia honerany avo sasaka.
5Raha misy olona nanimba voly na tanim-boaloboka, fa nampitondraka ny bibiny tamin'ny sahan'olona dia honerany izany amin'izay tsara indrindra amin'ny voliny sy amin'izay tsara indrindra amin'ny tanim-boalobony.
6Raha misy afo mirehitra ka mahazo ny tsilo aloha, izay vao mandevona amboaram-bary koa, na vary tsy mbola voajinja, na saha, dia hanonitra izay nandrehitra ny afo.
7Raha misy nametra-bola na fanaka hotehirizin'ny namany, ka nangalarin'ny sasany tao an-tranon'ity namany izany: raha hita ny nangalatra dia hanonitra avo sasaka, 8fa raha tsy hita ny mpangalatra, dia hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ny tompon-trano, sao dia noraisin'ny tànany ihany ny fananan'ny namany. 9Na inona na inona zavatra ifandirana, na omby na ampondra na ondry na fitafiana, na zavatra inona na zavatra inona very, ka lazain'olona hoe: Izy indrindra ity, dia hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ny tenin'izy roa tonta, ka izay hohelohin'Andriamanitra dia hanonitra avo sasaka ho an'ny namany.
10Raha misy olona manome omby na ondry na biby hafa anankiray hotehirizin'ny namany, ka maty ilay biby na tapaka, na nisy naka, nefa tsy nisy nahita, 11dia ny fianianana amin'ny Tompo no hampanaovina amin'izy roa tonta hahalalàna raha noraisin'ny tànany ny fananan'ny namany, ary hanaiky izany ny tompom-biby, dia tsy hanonitra itsy anankiray. 12Raha tao aminy anefa no nangalarana ny biby, dia tsy maintsy manonitra amin'ny tompom-biby izy. 13Ary raha voaviraviram-biby masiaka ny biby, izay sisa tsy laniny no hoentiny ho vavolombelona, dia tsy hanonitra ilay biby voaviravira izy.
14Raha misy olona mindram-biby amin'ny namany, ka tapaka na maty ilay biby tsy teo anatrehan'ny tompony, dia hisy onitra; 15fa raha teo anatrehan ny tompony kosa, tsy hisy onitra. Ary raha biby nohofany, dia ny hofany no ho solon'ny onitra.
16Raha misy lehilahy manakojikojy zazavavy tsy foafofo ka mandry aminy dia handoa ny hajam-bolany izy ka hanambady azy. 17Ary raha lavin-drainy ny hanambadiany azy, dia ny vola fanome amin'ny zazavavy virijiny no haloany.
18Aza velomina izay zazavavy mpanao ody.
19Ataovy maty izay olona miray amin'ny biby.
20Ataovy anatema izay manolotra sorona amin'ny andriamanitra, fa tsy amin'ny Tompo irery.
21Aza ratsy fitondra vahiny na mampahory azy, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Ejipta koa hianao.
22Aza manao izay hampalahelo ny mpitondra tena sy ny kamboty; 23fa raha manao izay mampalahelo ireny hianao, dia hitaraina amiko izy, ka hohenoiko ny fitarainany; 24hirehitra ny fahatezerako ka haringako amin'ny sabatra hianareo; ary ny vadinareo ho mpitondra tena, ny zanakareo ho kamboty.
25Raha mampisambo-bola olona amin'ny vahoakako hianao, amin'ny mahantra eo aminao, aza mitsangan-ko mpànana vola aminy, aza maka zana-bola aminy.
26Raha alainao ho antoka ny kapaotin'ny namanao dia avereno aminy alohan'ny maty masoandro, 27fa iny no hany firakofany, iny no fitafiana anaronany ny vatany, ka inona ary no hentiny mandry? Raha mitaraina amiko izy, hohenoiko ny fitarainany, fa antra olona aho.
28Aza miteny ratsy an'Andriamanitra, na manozona ny filohany amin'ny firenena.
29Aza milasilasy amin'ny fanaterana amiko ny voaloham-bokatry ny varinao sy ny voalobokao. Atolory ahy ny lahimatoa amin'ny zanakao lahy. 30Ataovy toy izany koa ny voalohan-teraky ny omby aman'ondrinao; hafitoana no hiarahany amin-dreniny dia haterinao ho ahy izy amin'ny andro fahavalo.
31Ho olona masina ho ahy hianareo; aza mihinan-kena voaviraviram-biby hita any an-tsaha, fa atsipazo ho an'ny amboa ireny.
Eksaody toko 23
Didy sy fitsipika ary sazin'ny heloka sasany - Fitahiana ho an'izay hitandrina ny fanekena.
1Aza manely tsaho tsy marina. Aza manampy ny ratsy fanahy ka mitsangan-ko vavolombelona manombotomboka.
2Aza momba ny maro hanao ratsy; raha misy ady aza miandany amin'ny maro ka mitsangan-ko vavolombelona nampitanila ny fitsarana. 3Aza momba ny malahelo amin'ny adiny.
4Raha hitanao mania ny ombim-pahavalonao na ny ampondrany dia aza diso ny mamerina izany any aminy. 5Raha hitanao mihonaka ao ambanin'ny entany ny ampondran'izay mankahala anao, dia aza ilaozanao izy, fa miraisa hina aminy hanala ny entany.
6Aza mamilivily ny rariny ananan'ny mahantra raha manana ady izy. 7Fadio ny ady tsy marina ka aza mamono ny tsy manan-tsiny sy ny marina, fa tsy hamela ny meloka aho.
Pejy: Voalohany < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Manaraka Farany